प्रदेश प्रमुखको मासिक तलब कति ? के–के पाउँछन् अन्य सुविधा ? – Life Nepali
प्रदेश प्रमुखको मासिक तलब कति ? के–के पाउँछन् अन्य सुविधा ?
काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको पालामा नियुक्ति भएका प्रदेश प्रमुखहरुलाई हालै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पदमुक्त गरेर नयाँ नियुक्ति गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखलाई कति सुविधा हुन्छ ? कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ । अन्यको भन्दा प्रदेश प्रमुखहरुको सुविधा आकर्षक हुने गरेको छ । उनीहरुलाई बस्नको लागि आवास, मासिक पारिश्रमिक, बीमा, भत्ता, पोशाक र सचिवालयसहितको आकर्षक सुविधा हुने गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ का अनुसार प्रदेश प्रमुखहरूले मासिक पारिश्रमिक (अहिले बढेको) ७४ हजार २ सय ४० रुपैयाँ पाउँछन् । अन्य विविधसहित जोडेर प्रदेश प्रमुखहरुले मासिक १ लाख १४ हजार २ सय ४० रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । त्यसोत त उनीहरुले चार जना स्वकीय सचिवसहित १२ जनाको सचिवालय राख्न पनि पाउँछन् । प्रदेश प्रमुखहरुलाई पोशाक बापत वार्षिक रुपमा १८ हजार रुपैयाँ आउने गर्छ भने अतिथि सत्कार र भैपरी आउने खर्चबापत ४० हजार पाउँछन् ।
यस्ता छन् नयाँ प्रदेश प्रमुखहरु
नेकपाको सक्रिय राजनीति गरिरहेका उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार शपथ गराएपछि उनीहरूले प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । सोमबार बिहान बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले सात जनाको नाम छनोट गरेको थियो । नियुक्त भएकामध्ये ४ जना पूर्वएमाले र ३ जना पूर्वमाओवादी पक्षका छन् । अधिकारी, प्रसाईं, यादव र कलौनी पूर्वएमालेका हुन् भने परियार, शेरचन र पन्त पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारले नियुक्त गरेका सातै जना प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतबार साँझ राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेकी थिइन् ।
प्रदेश १:- सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’
कास्कीका अधिकारी प्रदेश १ प्रमुखमा नियुक्त भएका छन् । २००७ सालमा जन्मिएका अधिकारी २०१८ देखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका हुन् । नेकपाको आमन्त्रित स्थायी समिति सदस्य उनले बारम्बार जेलजीवन बिताएका छन् । बीएडसम्म अध्ययन गरेका अधिकारी राजनीतिसँगै साहित्यमा पनि रुचि राख्छन् । २०४३ मा तत्कालीन मालेको तर्फबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य जितेका उनले २०४८ सालको चुनावमा कास्की ३ बाट चुनाव जितेका थिए । यस पटक मंसिर १४ गते कास्की २ मा हुन लागेको उपचुनावमा गण्डकी प्रदेश कमिटीले उनको नाम पनि सिफारिस गरेको थियो । तर पार्टीले विद्या भट्टराईलाई टिकट दिएर उनलाई प्रदेश प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश २ :- तिलक परियार
प्रदेश २ का प्रमुख परियार नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं पुराना वामपन्थी नेता हुन् । २०२८ सालदेखि राजनीति सुरु गरेका उनले लामो समय भूमिगत राजनीति गरेका थिए । २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीबाट बाँके क्षेत्र नम्बर १ मा निर्वाचित भएका थिए । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीमा लागेर उनले संविधानसभा चुनाव बहिष्कार गरे । पछि रामबहादुर थापाहरूसँगै पुनः पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादीमा फर्किए । स्नातकसम्म अध्ययन गरेका परियार रोल्पामा जन्मिएका हुन् । लामो समय भारत बसेको उनको परिवार पछि बाँकेमा बसाइँ सरेको थियो । उनी तत्कालीन माओवादीनिकट दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष पनि बनेका थिए ।
प्रदेश ३ : – विष्णु प्रसाईं
प्रदेश ३ को प्रमुख प्रसाईं पञ्चायतकालमा कम्युनिस्टहरूले सञ्चालन गरेको झापा आन्दोलनमा सक्रिय थिए । २०१० साउन २१ गते जन्मिएका उनले एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छन् । उनी अहिले नेकपा प्रदेश १ कमिटीका सदस्य थिए । २०५६ सालको संसदीय चुनावमा उम्मेदवार रहे पनि उनी पराजित भएका थिए । तत्कालीन एमालेले उनलाई झापाको मेचीनगर नगरपालिकाबाट चुनावमा उठाएको थियो । उक्त चुनाव पनि उनले जित्न भने सकेनन् ।
को हुन् नयाँ प्रदेश प्रमुख ?
गण्डकी प्रदेश :- अमिक शेरचन
गण्डकी प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका शेरचन २००६ सालमा म्याग्दीको ओखरबोटमा जन्मिएका हुन् । २०१७ सालदेखि नै उनी राजनीतिमा सक्रिय थिए । १६ वर्ष भूमिगत र ३ वर्ष जेल जीवन बिताएका उनले राजनीतिशास्त्रमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका छन् । २०६३ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग पार्टी एकता हुनुअघि उनी तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रको चुनावी मोर्चा जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष थिए ।
२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा शेरचन उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०६४ को संविधानसभा चुनावमा चितवन क्षेत्र ५ बाट विजयी भएका थिए । उनले तत्कालीन संविधानसभाको राष्ट्रिय हित संरक्षण समिति सभापतिको भूमिकामा काम गरेका थिए । त्यसबेला उनले प्रत्येक नागरिकलाई सैन्य तालिम दिनुपर्ने भनी गरेको प्रस्ताव विवादमा परेको थियो । सरकारले प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गर्नुअघिसम्म उनी पार्टीमा भूमिकाविहीन जस्तै थिए । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि शेरचनलाई आमन्त्रित स्थायी समिति सदस्य बनाइएको थियो । त्यसप्रति उनले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
प्रदेश ५ :- धर्मनाथ यादव
प्रदेश ५ को प्रमुखमा नियुक्त भएका यादव सिरहाका नेता हुन् । एमाले पृष्ठभूमिका ७६ वर्षीय यादव लामो समयसम्म शिक्षण पेसामा आबद्ध थिए । २०२७ देखि २०४८ सम्म स्थानीय विद्यालयमा पढाएका उनी २०४८ को संसदीय निर्वाचनमा सिरहा १ मा उम्मेदवार थिए तर चुनाव हारे । तत्कालीन एमालेको अनुशासन आयोगको सदस्य रहेका उनी प्रदेश प्रमुखहरूमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ हुन् ।
कर्णाली प्रदेश :- गोविन्द कलौनी
कर्णाली प्रदेश प्रमुख कलौनी पूर्वएमालेमा रहेर सक्रिय राजनीति गरेका नेता हुन् । दोगडाकेदार गाउँपालिका बैतडीमा जन्मिएका उनी २०५१ को मध्यावधि चुनावमा डडेलधुरामा नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । २०५६ मा तत्कालीन नेकपा मालेबाट बैतडीमा र २०६४ मा एमालेका तर्फबाट कञ्चनपुरमा उम्मेदवार बने तर कुनै पनि चुनावमा विजयी हुन सकेनन् । विज्ञान विषयका शिक्षक कलौनी शिक्षण पेसा छाडेर राजनीतिमा लागेका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश : – शर्मिलाकुमारी पन्त
५१ वर्षीया पन्त सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख नियुक्त भएकी छन् । उनी बेपत्ता पारिएका परिवारकी सदस्य हुन् । उनका श्रीमान् ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई २०६० असोज ९ गते तत्कालीन सेनाले काठमाडौंको शान्तिनगरबाट बेपत्ता पारेको थियो । २०२५ साल पुसमा जन्मिएकी उनले स्नातकसम्मको अध्ययन गरेकी छन् । उनले २०५७ बाट तत्कालीन माओवादीको सदस्यता लिएर राजनीति सुरु गरेकी हुन् । उनी तत्कालीन एमाओवादीनिकट राज्यले बेपत्ता पारेका व्यक्तिको परिवार समाजको अध्यक्ष पनि थिइन् ।
Previous कैलालीमा ८६ उद्योग खारेज
Next ५००मा किनेको एक चि’ट्ठाले संजीवको च’म्कियो भा’ग्य बने रा’तारा’त क’रोडपति !